कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: एपीएफ एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट च्याम्पियन बन्न सफल
एपीएफ एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट च्याम्पियन बन्न सफल
पेप्सी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट –२०६९ गत शुक्रवार त्रि.वि. कीर्तिपुरको अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न भएको छ । यस वर्षको वान–डे राष्ट्रिय क्रिकेटको फाइनल गत वर्षको विजेता एपीएफ र क्षेत्र नम्बर–४ भैरहवा विच भएको थियो । यस प्रतियोगितामा भैरहवाले पहिला ब्याटिङ्ग गर्दै २२१ रनमा समेटिएको थियो । जवाफी ब्याटिङ्ग गर्दै कप्तान पारस खड्का र सुवास खकुरेलको अर्धशतकमा एपीएफले ३४ ओभर १ बलमा ४ विकेटको नोक्सानीमा २२७ रन बनाइए यस दशौं संस्करणको वान–डे राष्ट्रिय क्रिकेट च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो । यसरी एपीएफले ३ वर्षको अन्तरालमा यो समेत गतवर्षको राष्ट्रिय च्याम्पियन सहित घरेलु क्रिकेटमा ६ उपाधी हात पारिसकेको छ । जसमा पाँचौं र छैठौं राष्ट्रिय खेलकुद पनि सामेल छ । यो दशौं पेप्सी स्ट्यान्टर्ड चार्टर्ड वान–डे राष्ट्रिय क्रिकेट ट्रफी वियसँगै नगद रु १लाख ५० हजार समेत हात पारेको छ । यस प्रतियोगितामा वीरगञ्जका अमित श्रेष्ठले २ शतक सहित कुल २४८ रन बनाई उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान भई रु. १५ हजार जित्न सफल भएको थियो । त्यसै गरी चार खेलमा १२ विकेट लिई बसन्त रेग्मी उत्कृष्ट बलरको रुपमा चुनिए । २७५ रन र ६ विकेट लिन सफल अलराउन्डर सागर पुन प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडि घोषित भए जसबाट उसले २० हजार जित्न सफल भए भने वसन्तले रु.१५ हजार जितेको थियो । त्यसैगरी वान–डे राष्ट्रिय क्रिकेटको इमर्जिङ प्लेयर भै भैरहवाका फैजरुल रहमान पनि घोषित भएको थियो ।
यसरी यो दशौं वान डे राष्ट्रिय क्रिकेट–२०६९ निकै सफल भएको देखिन्छ । यस प्रतियोगितामा ५ खेलाडिले कुल ६ शतक हिर्काएका थिए । २०५८ सालदेखि प्रारम्भ भएको वान–डे राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा अहिलेसम्म च्याम्पियन बन्न सफल यस प्रकार छन । २०५८–विराटनगर, २०५९— विराटनगर, २०६०—विराटनगर, २०६१—विराटनगर, २०६३—विरगञ्ज, २०६४— भैरहवा, २०६५— काठमाडौं, २०६६— काठमाडौं, २०६८—एपीएफ, २०६९— एपीएफले जितेका छन ।
त्यसैगरी इन्डियन एजुकेशन सर्भिसेसको सहयोगमा जैन युनिभर्सिटी बैंगलोरको आयोजनामा त्रि.वि.को खेल मैदानमा गत पुस ७ गते शनिवार सम्पन्न सीपीएल ट्वान्टी ट्वान्टी क्रिकेटको उपाधि जित्न ट्रिटन कलेज सफल भएको छ ।
गोल्डेन गेटले पहिला ब्याटिङ्ग गर्दै १६.३ ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर ८० रनमात्र बनाउन सफल भएको थियो । गोल्डेन गेटलाई सस्तोमा समेट्ने क्रममा ट्रिटनमा वसन्त रेग्मीले सर्वाधिक ३ विकेट लिएका थिए । जवाफी ब्याटिङ्गमा ट्रिटनले केवल १२.३ ओभर २ विकेटको नोक्सानीमा ८४ ्न बनाई च्याम्पियन भएका थिए । विजयी टोलीलाई जित दिलाउने क्रममा विनोद भण्डारीले सर्वाधिक ५१ रन बनाई म्यान अफ दि म्याच घोषित भएका थिए ।
यस प्रतियोगितामा च्याम्पियन बन्न सफल ट्रिटन कलेजले बैंगलोरमा आगामी जनवरी १६ देखि २६ सम्म हुने अन्तराष्ट्रिय कलेज स्तरीय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छ । स्मरणरहोस यस छनोट प्रतियोगितामा कीर्तिपुरको साउथ वेष्ट क्रिकेट क्लबका खेलाडिहरूले लेबोरेटरी उच्च मा.वि. तर्फबाट सहभागिता जनइएको थियो । जुन सेमिफाइनलसम्म पुग्न सफल भएको थियो । यसरी अन्तरराष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय खेलाडिद्वारा भरिएको अरु कलेजका टिमलाई चुनौती दिन हाम्रा खेलाडि सफल भएको थियो ।
यसरी अनुभवको लागि भएपनि यस्ता प्रतियोगितामा सहभागी जनाउन पाउनु भनेको राम्रो कुरा हो ।
प्रथम पलिस्था स्मृति वास्केटवल प्रतियोगिता राराहिलको पोल्टामा
गत पुस ३ गते मंगलवारदेखि राराहिल मेमोरियल स्कुलमा सुरु भएको प्रथम पलिस्था मानन्धर स्मृति बास्केटवल प्रतियोगितामा राराहिलले विजय हासिल गरेको छ ।
पुस ५ गते भएको सेमिफाइनल खेलमा राराहिलले पुष्पसदनलाई हराएर फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएका थिए । त्यस्तै दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा न्यू जेनिथले हिल टाउन स्कूललाई हराई फाइनलमा प्रवेश गरेका थिए । सोही दिन भएको फाइनल खेलमा राराहिल स्कूलले न्यू जेनिथ स्कूललाई ११ को विरुद्ध १४ अंकले पराजित गरी विजयी भएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा राराहिलका हिमाल तामाङ उत्कृष्ट खेलाडि घोषणा भएका थिए ।
खेलको समाप्ति पछि राराहिलका प्रिन्सिपल नारायण महर्जन, स्व. पलिस्थाका आमा बुबा र नेपालका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडि रविन्द्र महर्जनले विजयी टिम तथा बास्केटवल खेलाडिहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो ।